Dabere na akụkọ ọhụrụ nke Report Monitor wepụtara, aha ya bụ "Rockbreaker System Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast site na 2021 ruo 2027." Ahịa dị ọnụ ahịa na xx nde US dolla na 2019 ma na-atụ anya iru xx site na 2019 Otu nde US. B ...
Ezubere ihe mgbakwunye hydraulic MB 1500 nke Atlas Copco Construction Tools Co., Ltd. ezubere na obere akụkụ na-akpụ akpụ ma nwee ntụkwasị obi kachasị mma. Ọ bụ ezigbo maka disassembly, okporo ụzọ injinịa, trenchi na nke abụọ nkume ndinuak. Ejikọtara nkeji ọhụrụ yana ụdị anọ dị ugbu a iji chịkọta ...
EVOQUIP ekwuputala nhọpụta nke FJS Plant Repairs Ltd dị ka onye na-ekesa ikike na Ireland. FJSPlant ga - enye akụrụngwa EvoQuip zuru oke, gụnyere igwe ngwepịa, nyocha na akụrụngwa njem; mbụ akụkụ ahụ mapụtara; na n'ibu mmezi, nile n'ihe ndina ...
Los Angeles, USA: QY Research kwuru na ahịa zuru ụwa ọnụ nke Rockbreaker Systems na-atụ anya ịrị elu na oke egwu na afọ ole na ole sochirinụ. A na-akpọ akụkọ ahụ "Global Rockbreaker System Market Insights and Foreccast to 2027," ọ na-enyekwa nyocha zuru oke nke mar ...
1, na excavator ọrụ technology mbụ iji gosi na ọnọdụ gburugburu. Rotary ọrụ, gburugburu ihe mgbochi, teren mara akara, mma ọrụ; arụ ọrụ, iji kwado usoro ụzọ ntụgharị ihu na ihu, iji zere ịpị ma ọ bụ mmetụta; gbalịa ka ị ghara inye ụgbọala ikpeazụ na ihu nke ...
Hydraulic emebi na nkume hama na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi
1. Mmetụta nkwụsị nke ọma Maka ngwepịa dị irè, onye na-emebi hydraulic na-emetụta ike mgbagha kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ike mgbari ezughi oke, mgbe ahụ ike pistin hama agaghị arụ ọrụ gravel dị irè; N'ụzọ dị otú a, a ga-ebufe ikike nke hama n'ike na nkume brea ...
haịdrọlik emebi mmezi
Achọrọ nyocha nyocha ọ bụla na 8 ọrụ ọ bụla ma ọ bụ otu ugboro n'ụbọchị. ọnọdụ nke haịdrọlik usoro • ego b ...
ndị na-emepụta ihe na-eme ka ndị na-agbaji haịdrọlik kesara ngwa nke haịdrọlik na obere scraper
A na-ejikọta obere scraper na haịdrọlik hazị iji mezuo ebumnuche nke igwe nwere ọtụtụ ebumnuche. Echiche bụ isi bụ iji usoro hydraulic nke obere scraper n'onwe ya iji dozie ọnọdụ nke hama (gụnyere mgbanwe dị elu na mgbanwe Angle), ma n'otu oge ahụ ịbawanye ...
Nitrogen Nchaji mara
Kedu ihe kpatara ịgbakwunye nitrogen? Nitrogen dị na hama na-azọpịa jiri hama na-akụpịpịa hamma iji chekwaa ike fọdụrụnụ na ike iweghachi nke piston n'oge iku gara aga, ma wepụta ike n'otu oge n'oge iku nke abụọ iji mee ka ikike iku. Na nkenke, ef ...
Ojiji nke ihe eji emebi ikuku
ihe nkedo ihe nkedo nke hydraulic jikọtara obere ihe na ịkụ ala, ihe m na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ maka ikpo ọkụ na oghere oghere, oghere nchara oghere nke hexagonal n'ime ogige 22 mm na 25 mm na dayameta, n'èzí dayameta nke ogige na oghere 38 mm to 32 mm ...